६ संकेत तपाईंको सम्बन्ध ‘डेन्जर जोन’मा छ – News Portal of Global Nepali
2:47 AM | 7:32 AM
६ संकेत तपाईंको सम्बन्ध ‘डेन्जर जोन’मा छ
त्यसैले प्रेम-सम्बन्धलाई दाम्पत्य जीवनको पूर्व तयारी समेत मान्न सकिन्छ । यहीबेला आफ्ना पार्टनरको रुची, स्वभाव, प्रवृत्ति, इच्छा, लक्ष्य, बानीव्यवहार आदि थाहा पाउन सकिन्छ । प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला पार्टनरका सबै आनीबानी थाहा हुन्छ । कतिपय आनीबानी यस्ता हुन्छन्, जसले वैवाहिक जीवनलाई खल्लो बनाउँछ । यदि पार्टनरको संकेत खराब छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुँदैन ।
तपाईंको पार्टनर तपाईंको प्राजेक्ट र लक्ष्यको बारेमा के सोच्छन् ? के ऊ नै तपाईंको जीवनको सबै निर्णय लिन्छन् ? तपाईंले के गर्ने/के गर्ने भन्ने कुरा पार्टनरले नै तय गर्छन् ? यस किसिमको सम्बन्धले तपाईंलाई रोबोट बनाउँछ । यसबाट जति सक्दो अलग हुनु नै राम्रो ।
कोरोनाबाट संक्रमित एक २६ वर्षीय महिलाले बच्चा जन्माइन्